Chelsea oo soo wadata bedelka Luiz - Jazeera FM
Chelsea oo soo wadata bedelka Luiz
January 2, 2018 admin featured
Wararka ka imaanaya dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in Kooxda xafidanaysa tartanka English Premier League ay odorasayso xaalada daafaca boosaska badan ee Kooxda Juventus Giorgio Chiellini.
Hogaamiyaha Kooxda Blues Antonio Conte ayaa dhawaan sheegay inuusan la dhacsaneen hab dhaqanka Cayaariyahan David Luiz, kaas oo la ogson yahay in uu jiro qilaaf u dhexeeya labada dhinac.
Daafac guran ee Kooxda Cajuusta Giorgio Chiellini ayaa dhawaan hakad geliyay wadahadalo sare logu qaadayo joogitaanka Kooxdiisa, hase yeeshee Maamulka Kooxda Blues ayaa diyaar u ah in ku qanciyaan imaatinka Magaalada London.
Tababarihii hore ee Kooxda Juventus Conte ayaa 33-sano jirka reer Talyaani ee Chiellini lasoo shaqeeyay intii u dhaxaysay 2011 ilaa iyo 2014, ka hor inta aysan mar kale ku midobin waajibaadka Xulka Qaranka Italia.
Si kastaba ha ahaatee, Luiz ayaa laga yabaa in uu ka tagi Kooxda Chelsea ka hor bisha Janaayo, kaas oo sidoo kale lala xiriirinayo Kooxda kasoo jeeda waqoyiga magaalda London ee Arsenal, kaddib markii uu lumiyay kalsoonida Hogaamiyahiisa Conte.
The post Chelsea oo soo wadata bedelka Luiz appeared first on Goolasha.net.
← Stefan de Vrij oo dortay Kooxda uu ku birayo, Barca, Blues, Inter iyo kuwa kale
safafka Kooxaha City iyo Watford, De Bruyne →